Foko – Fivondronana · RAHELY’S Blog – Tous ensemble pour Madagascar – Madagasikara, Malagasy miara-misikina
> Foko – Fivondronana
Posté par rahelys dans : Signification - Dikan'ny teny,vie quotidienne	, trackback
Misy ifandraisany ve ny teny hoe « foko » ilay resahin’i Olga sy ilay teny hoe « foko » « mon coeur » ?
Fanotaniana ny ahy.
Ny haty (foie) ny dikany any indonezia dia hoe « fo ».
ny teny hoe « anaty », « ati-tany », « atidoha » dia amin’ilay teny fototra hoe « haty ».
Ny foko ve sao dia misy hitovizana amin’ny teny hoe « aty » « anaty »
Eritreritra ihany an !
Dikany iray tokoa io voalazanao io, izay lazain’ny Baiboly ohatra!
Tena « fivondronana » mihintsy no tiako ambara eto kah !